Lionel Messi oo Jabiyay Rikoorkii Gerd Muller Ee Goolasha Hal Sanno
Lionel Messi oo Jabiyay Rikoorkii Gerd Muller Ee Goolasha Hal Sanno.
Ciyaaryahan Lionel Messi ayaa xalay jabiyay rikoorka Gerd Muller ee goolasha ugu badan ee ciyaaryahan hal sanno dhaliyo, isagoo dhaliyay goolkiisii 86aad ee sannadkan 2012 welina isbuucyo ay uga hartay sannadkan oo uu ku sii dheereysto rikoorkiisa cusub.
Ciyaaryahanka reer Jarmal ayaa sannadkii 1972-dii wuxuu u dhaliyay kooxdiisa Bayern Munich iyo wadankiisa West Germany 85 gool, taasoo in muddo aheyd rikoorka ciyaaryahan uu ku dhaliyo goolasha ugu badan hal sanno.
Lionel Messi oo xalay labo gool u dhaliyay kooxdiisa Barcelona 25-kii daqiiqo ee ciyaarta ugu horeysay ayaana dhaafay rikoorka Gerd Muller isagoo haatan dhaliyay sannadkan 86 gool.
Muller ayaa rikoorkaan markii uu dhigayay waxa uu Bayern Munich u dhaliyay 72 gool, halka Germany uu u dhaliyay 13 gool. Messi ayaa isna ilaa iyo haatan sannadkan 2012 waxa uu Barcelona u dhaliyay 74 gool, halka Argentina uu u dhaliyay 12 gool.
Hadaba Daawo 86-da Gool ee uu dhaliyay sanadkaan Lionel Messi